मलेशियामा विदेशी कामदारहरू ल्याउने बारे आयो यस्तो खबर ! - jagritikhabar.com
मलेशियामा विदेशी कामदारहरू ल्याउने बारे आयो यस्तो खबर !
सोमबार (१० जनवरी २०२२) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीले छिट्टै मिति घोषणा गर्ने बताए । “यस विषयमा, म गैरजिम्मेवार पक्षहरूबाट धोकाबाट बच्नको लागि आवेदन प्रक्रियालाई छिटो बनाउनको लागि बिचौलिया वा तेस्रो पक्षहरू मार्फत कुनै पनि भुक्तानी नगर्न रोजगारदाताहरूलाई सल्लाह दिन्छु,” उनले भने।
गत १० डिसेम्बर २०२१ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वृक्षारोपण क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी कामदार भर्ना खुला गर्ने सहमति भएको थियो ।
अनुमति प्राप्त क्षेत्रहरू कृषि, उत्पादन, सेवा, खानी र उत्खनन, निर्माण र घरेलु कामदारहरू हुन्। सरवाननले विदेशी कामदारहरूलाई काममा राख्न चाहने रोजगारदाताहरूलाई उनीहरूको वास्तविक आवश्यकताको आधारमा आफ्नै आवेदन पेश गर्न पनि सम्झाए।